Izinkunzi embangweni wohlelo lwe-TV - Ilanga News
Home Izindaba Izinkunzi embangweni wohlelo lwe-TV
Izingqinamba ziholele ekutheni zihlehle izinhlelo zabo
UMTHANDENI Manqele noKhuzani Mpungose abasembangweni ngokusakazwa kwezinhlelo zabo kwaSABC.
KUSOLWA umbango kubaculi bakamasikandi (abayizimbangi), okuthiwa usuholele ekuhlehlisweni kokuqala kohlelo olungempilo yabo kwi-SABC 1, okuvela ukuthi bekulindeleke ukuba ziqale ngempelasonto.
Ngokuthola kweLANGA, beku-hlelwe ukuthi uhlelo lweGcokama Elisha oluthi, “Ushuni Kamaska-ndi” nolukaKhuzani “iNdlamle-nze” Mpungose oluthi, “Inkosi Kamaskandi”, zidlale ngoMgqibelo nangeSonto ngokwehlukana.
Kubikwa ukuthi okususe umsi-ndo wuhlelo oluzosetshenziswa ukutomula umculi okuzokhonjiswa uhlelo lwakhe ngoMgqibelo noluzokhonjiswa ngeSonto.
Kuthiwa uKhuzani ngokusebenzisa iBarleader Productions, kaMnu Legend Manqele, okuyiyona eqopha uhlelo lwakhe, ufake isikhalo kwaSABC ngenkulumo eyenziwe yiGcokama ohlelweni lukamaskandi, uSigiyangengoma, Okhozini FM ngoMgqibelo odlule, olusakazwa nguZimiphi “Zimdollar” Biyela.
Lithe lixoxe neSABC ukuthi makwenziwe lolu hlelo lokutomula umculi okuzovezwa uhlelo lwakhe kuqala.
“Ngifuna ukuqondisa lokhu njengomuntu onezivumelwano eziqondile neSABC, njengomuntu othatha izinqumo, akekho onolwazi ukuthi uhlelo luzoqala nini, kodwa ngithe ngoba kunomculi oseceleni naye oqhamuke nolwa-khe, ngathi ngiyafisa kuthoswe (toss). Ngiwushayile lowo mthetho, ngaqonda nje ngqo,” kusho iGcokama.
Lithe lo mculi uceleliwe ukuba ampintshiswe naye. Umthombo weLANGA uthi okucasule uKhuzani wukuthi sekubukeka uhlelo seluzolandela imigomo ebekiwe yimbangi yakhe kwaSABC.
“Akafuni nakuyizwa impela le ndaba. Sifakiwe isikhalo kwabe-kwa kwacaca ukuthi lezi zinhlelo ngeke zidlale uma kuzosetshe-nzwa ngale ndlela.
“UKhuzani uthi yena ubengazi ukuthi kanti umpintshisiwe kwa-SABC, nokuthi izinqumo ngalezi zinhlelo zithathwa nguMthandeni, ngakho-ke yena ngeke alandele izimfuno nemithetho eshaywe nguyena,” kusho umthombo.
Ebuzwa uKhuzani ngalezi zindaba, uthe makuxhunyanwe nezinkampani ezisingethe lezi zindaba, akukho akwaziyo.
“Kuyichilo okushiwo yiGcokama futhi kudukisa abantu ngoba kalinayo imvume yokwenza lokho. Kwathina imbala njengezinka-mpani ezikhiqiza okukamabona-kude, kasinayo imvume.
“Uhlelo lokushaya idayisi (toss coin) kaluzange luqhamuke neGco-kama, kepha yiSABC eshaye lowo mthetho ngoba yiyona enezwi kukho konke lokhu. Lidukise abantu ngokuqamba amanga esi-dlangaleni.
“Le nto eliyenzayo iwukungaziphathi kahle futhi itshengisa ubungane. Iveza indlela engahlo-niphekile ngomasikandi, okuyinto esizama ngayo yonke indlela ukuyiqeda ngoba abalandeli balo mculo, bangabantu besintu futhi abanenhlonipho,” kusho uMnu Manqele.
Ukuqinisekisile ukuthi uhlelo ngeke lusadlala ngoMgqibelo. “ISABC ikhethe ukuhlehlisa usuku lokuqala kohlelo ngenhloso yokuqhamuka necebo lokuthi ngolukabani oluzoqala,” kusho yena.
Lithintwa iGcokama Elisha lithe: “Kanti ungitshela ngalowo muntu (uKhuzani), ngizobuyisa nalokhu kudla engikudlayo.” Liqede ukusho njalo lavala uci-ngo.
I-SABC ngomlomo kaNks Gugu Ntuli, oyiSABC Group Executive for Corporate Affairs and Marke-ting, ithe zombili lezi zinhlelo
zalaba baculi zizoboniswa nge-mpelasonto yomhla ka-24 kuya ku-26 kuMandulo (September) ngenhloso yokuziqondanisa nosuku lwamagugu (umhla ka-24). “I-SABC ingakuqinisekisa nokuthi indaba yokushaywa kwedayisi ukuthola ukuthi yiluphi uhlelo oluvezwa kuqala, imisiwe ukuthola indlela ezogculisa womabili amaciko,” kusho uNks Ntuli.
Previous articleIphoyisa lilokhu liwaphike njalo amacala okubulala izihlobo
Next articleUxolisa kubalandeli ‘ngamanyala’ ezakhe